Abanye abahlali bayakuphikisa ukushintshwa kwegama e-PE | Scrolla Izindaba
Abanye abahlali bayakuphikisa ukushintshwa kwegama e-PE
Ezinye izakhamizi zendawo ebiyaziwa nge-Port Elizabeth ziphikile ukuthi manje sezihlala e-Gqeberha – kanti imeya uNqaba Bhanga uyalusukumela udaba lwabo futhi ufuna ushintsho luguqulwe.
UNgqongqoshe Wezobuciko Namasiko uNathi Mthethwa unikeze leli dolobha ngokusemthethweni igama lalo elisha ngeviki eledlule. I-Gqeberha yigama lesi-Xhosa lelokishi lase-Walmer, okungenye yamalokishi amadala kunawo wonke e-Port Elizabeth.
I-Port Elizabeth yaqanjwa ngowezi-1820 ngunkosikazi walowo owayengumbusi waseKapa uMnu uRufane Donkin – futhi akubona bonke abantu abamhlophe abahlala edolobheni abavumelana ngesidingo sokuqeda ifa elidala lamakoloni.
Kepha bathola imbangela evamile phakathi kwezakhamizi eziningi ezikhuluma isi-Xhosa edolobheni ezihlale zazi i-PE njengeBhayi. Abakhuluma isiBhunu kudala babeyibiza ngokuthi i-Die Baai.
Idolobha kanye ne-Uitenhage (manje eyi-Kariega) yakha umasipala wase-Nelson Mandela Bay, okungenzeka futhi kwaba yindlela ongayicubungula.
UBhanga uthe ngoLwesine ukholelwa ekutheni izinqubo ezilandelwe nguMthethwa nohulumeni we-ANC ukufika emagameni athi-Gqeberha nelithi-Kariega bezingababandakanyi. Uthe akaphikisani nokushintshwa kwamagama.
“Kodwa ukuze ushintsho lwegama lube nomqondo, kufanele luhlanganise abantu. Kufanele kube yigama elikhumbuleka kalula futhi elibonakalayo. Kufanele kube nokuxhumana okubalulekile ngokomlando nedolobha noma idolobha elithintekile,” uyasho.
UBhanga uthe usungula ikomidi lezinhlaka ezahlukene elizokweseka uhlelo lokuphikisa.
Esinye isigaba somphakathi esihlala sisekela lolu shintsho umphakathi wama-Khoisan osola uBhanga ngokungahambisani nezinguquko.
Yize uBhanga engeke akwazi ukuthi aguqule ukushintshwa kwegama, kungaba yipolitiki ehlakaniphile ukuhlangana ngegama elingathandeki elifakwe edolobheni yinhlangano esivele ibhekene namacala enkohlakalo nokungaphathwa kahle ngesikhathi sayo sobuholi bukaHulumeni wasekhaya.